Diyo post :: ट्रेकिङ व्यावसायमा ‘कालोधन्दा’ : पर्यटक विरामी बनाएर अकुत सम्पत्तिका मालिक ! ट्रेकिङ व्यावसायमा ‘कालोधन्दा’ : पर्यटक विरामी बनाएर अकुत सम्पत्तिका मालिक ! - Diyo post
काठमाडौं । धादिङको साविकको खहरे गाविस अचनेटारबाट काठमाडौं आई ट्रेकिङ व्यावसायमा हात हालेका राम प्रसाद सापकोटाको अस्वभाविक आर्थिक प्रगति देखेर पर्यटन व्यावसायीहरु नै ‘जिब्रो’ टोक्छन् ।
सामान्य परिवारमा जन्मिएका सापकोटाले ट्रेकिङ व्यावसायमा छिरेको केही वर्षमै अकुत सम्पति मात्रै आर्जन गरेका छैनन् करोडौंको भौतिक सम्पत्ति समेत जोडेका छन् । रानिबन स्थित राधाकृष्ण मन्दिर नजिकै दुई वटा ठूल्ठूला गगनचुम्बी महल छन् । एउटा महलमा स्विमिङ पुल बन्दैछ । यता सोह्र खुट्टेमा अर्को ‘बिल्डिङ’को निर्माण कार्य हुँदैछ । त्यहाँ सापकोटाले ‘अफिस’ राख्ने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ ।
उनको परिचय यतिमा मात्रै छैन । अल्टिच्युड एयर, होलि हिमालय होटल, आँखु खोला होइड्रो पावर र केही रेष्टुरेन्टमा समेत उनको लगानी छ ।
‘टुरिजम’का ‘भाइरस’ मानिने सापकोटाको अकुत सम्पतिको रहस्य के थियो त ? केही वर्षअघि सम्म रहस्यको गर्भमै रहेको उनको धन्दाको पर्दाफास भएको छ ।
उनको एकल स्वामित्वमा रहेको हिमालयन सोसियल जर्नि नामक ट्रेकिङ कम्पनि मार्फत पर्यटकलाई विरामी बनाउँने र उद्दारको नाममा चर्को शुल्क बिलिङ गर्ने सापकोटाको धन्दा हो ।
राजधानीको ठमेल स्थित गल्कोपाखामा रहेको घर नम्बर २६२ को दोस्रो तल्लामा सापकोटाद्वारा सञ्चालित हिमालयन सोसियल जर्नि ट्रेकिङ कम्पनि मार्फत जाने पर्यटकहरु अत्याधिक मात्रामा विरामी हुने गर्छन् ।
त्यहाँ कार्यरत एक गाइडका अनुसार त्यहाँ पर्वतारोही पर्यटकहरुलाई हिमालको आधारशिविर पुगेपछि केही खानेकुरा दिएर विरामी बनाउने र आफ्नै स्वामित्वमा रहेको अल्टिच्युड एयर नामक हेलिकोप्टरमा चढाएर रेस्क्यु गरिन्छ । ‘उहाँको हेलिकोप्टर नहुँदा त एउटा सिजनमा ६० देखि ७० वटासम्म रेस्क्यु गर्नु हुन्थ्यो,’ एक गाइडले भने,‘अहिले त आफ्नै हेलिकोप्टर छ । त्यो हिसाब किताब नै हुँदैन । एउटा रेस्क्युमा ४५ लाखसम्म लिनु भएको थियो ।’
ति गाइडका अनुसार हिमालयन सोसियल जर्नीमा पर्यटकहरुलाई सस्तोमा ट्रेकिङ गराइन्छ । ‘सस्तोमा ट्रेकिङ प्याकेज दिइनुको नियत चाहीँ हेलि मार्फत रेस्क्यु गराउने र चर्को शुल्क उठाउनु हो,’ उनले भने,‘राम सरको कमाउने धन्दा नै यही हो ।’
सामान्यतया एउटा सिजनमा ट्रेकिङ व्यावसायीले २ देखि ३ वटा विरामी पर्यटकको रेस्क्यु गराउँछन् । तर, सापकोटाको हिमालयन सोसियल जर्नीमा भने ७० देखि ८० वटासम्म ‘रेस्क्यु’ गराईन्छ । ति गाइडका अनुसार पर्यटकलाई विरामी बनाउन खानामा विष मिसाउनेसम्मका गतिविधि गाइडहरुले नै गर्छन् । पर्यटकलाई विरामी बनाए बापत हेलिकोप्टरमा रेस्क्यु पश्चात गाइडले प्रति विरामी ४० हजार रुपैयाँ कमिशन समेत पाउँछन् ।
विदेशी पर्यटकलाई विरामी बनाएर कमाउ धन्दा चलाई रहेका सापकोटाको कम्पनि विरुद्ध पर्यटन मन्त्रालयमा उजुरी परेको छ । उनको स्वामित्वमा रहेको हिमालयन सोसियल जर्नी र अल्टिच्युड एयर हेलिकोप्टर कम्पनिले विदेशी पर्यटकलाई जानाजान विरामी बनाएर करोडौं ठगी गरेको उजुरी पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको छानबीन समितिमा परेको छ ।
शक्तिको छत्रछायाँमा रामको रजाईं
सापकोटाको हेलिकोप्टर कम्पनिमा एक अर्का व्यावसायी पनि पार्टनर छन् – उनी हुन् सोनाम शेर्पा । तत्कालिन नेकपा एमालेलाई धुम्बाराही स्थित आफ्नो महल नै पार्टी कार्यालयका लागि उपहार दिएका उनी प्रधानमन्त्री केपी ओलीका निकट व्यक्ति हुन् ।
त्यस्तै सापकोटाले टानका पूर्व अध्यक्ष ज्योति अधिकारीको स्वामित्व रहेको ठमेलस्थित होलि हिमालय होटलमा समेत लगानी गरेका छन् । आफ्नै ट्रेकिङ कम्पनिमा आउने पर्यटकलाई विरामी बनाउने र विरामी पर्यटकलाई आफ्नै लगानी रहेको हेलिकोप्टराम उद्दारको नाममा ठगी गर्ने सापकोटालाई अधिकारीले संरक्षण गर्दै आएको स्रोतको दाबी छ ।
सापकोटा आफैँ समेत ट्रेकिङ व्यावासायीहरुको छाता संगठन ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसियशन अफ नेपाल टानका पूर्व उपाध्यक्ष हुन् । धादिङमा सञ्चालित ८.६ मेगावटको आँखु खोला हाइड्रोपावरमा उनी बोर्ड डाइरेक्टरको रुपमा समेत लगानीकर्ता छन् ।
छानबीन समिति भन्छ,‘सम्पत्ति सुद्धिकरणमा समेत छानबीन हुनसक्छ’
पर्यटन मन्त्रालयले विदेशी पर्यटकलाई विरामी बनाई विमा कम्पनिबाट करोडौं ठगी गर्ने व्यावसायीमाथि छानबीन गर्न सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको नेतृत्वमा छानबीन समिति बनाएको छ । समितिमा सापकोटाको हिमालयन सोसियल जर्नि नामक ट्रेकिङ कम्पनि र उनकै लगानी रहेको अल्टिच्युड एअरमाथि उजुरी परेपछि छानबीन थालेको छ । छानबिनका क्रममा समितिले अल्टिच्युड एअरलाई अहिलेसम्म कति गरिएको रेस्क्युको विवरण माग गरिएको छ । नागरिक उड्यन प्राधिकरणले अल्टिच्युड एयरसहित १० हेलिकोप्टर कम्पनिसँग विरामी उद्दारको विवरण माग गरेको हो ।
‘हिमालयन सोसियल जर्नि र अल्टिच्युड एयरको अलि बढी नै गुनासो आएको छ,’ समिति सम्बद्ध स्रोतले भन्यो,‘उहाँको अकुत सम्पत्तिको बारेमा समेत हामीले छानबीन गरेका छौँ । सम्पत्ति सुद्धिकरण समेत आकर्षण हुन सक्छ ।’
पर्यटन व्यावसायी भन्छन्,‘अन्तर्राष्ट्रिय छवि ध्वस्त हुने भो’
पर्यटन व्यावसायमा सापकोटा लगायत केही व्यावसायीले उद्दारको नाममा चर्को शुल्क ठगि गर्न थालेपछि नेपाली पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार समेत धुमिल बनेको एक पर्यटन व्यावासायीको गुनासो छ ।
‘उहाँले पर्यटनमा लागेको केही वर्षमै अथाह सम्पत्ति जोड्नु भएको छ । व्यावसाय गरेपछि पैसा त कमाउनु नै पर्छ । तर, हरेक व्यावासायमा इमान हुन जरुरी छ,’ उनले भने,‘पैसाको लागि पर्यटकलाई विरामी सम्म बनाएको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमसम्म पुग्यो भने नेपाली पर्यटन व्यावसायीमाथि विश्वासको वातावरण बन्दैन ।’
लामो समयदेखि गाइडको काम गर्दै आएका तारानाथ बोहोराले पर्यटन व्यावसायीले मनोमानी शुल्क विमा कम्पनिसँग दाबी गर्दा समस्या भएको बताउँछन् ।
‘स्थिति यस्तो आइसक्यो की अब विदेशी विमा कम्पनिले भन्न थालिसके नेपालमा इन्सुरेन्स गर्नु भनेको घाटा खानु हो,’ उनी भन्छन्,‘सरकारले नै एउटा निती बनाउँन जरुरी छ ।’
के भन्छन् सापकोटा ?
म अमेरिकामा ६ वर्ष बसेर आएको हुँ । मेरो विषयमा उजुरी परेको मलाई थाहा छैन । त्यो थाहा पाउने कोशिस गरिरहेको छु । हिमालयन सेसियल जर्नी नामक ट्रेकिङ कम्पनि पनि मेरो नै हो । अल्टिच्युड एअर, होलि हिमालय र आँखु खोला हाइड्रोमा पनि मेरो लगानी छ । मेरो भन्दा धेरै सस्तोमा ट्रेकिङ प्याकेज चलाउनेहरु छन् । अरुले भन्दा धेरै पैसा लिने गरेको छु । मेरो क्लाईन्ड धेरै नै आउँछन् । मैले आवश्यकता भन्दा धेरै रेस्क्यु गराएको छैन ।
‘क्लाइन्डले हेलिकोप्टर माग्दै म विरामी छु भनेपछि मैले दिनुपर्छ । मैले दिन सकिन भने त्यो क्लाइन्ड म कहाँ आउँदैन । मैले सर्भिस दिने हो । अटोमेटिक रुपमा मेरो कम्पनिमा बढी रेस्क्यु हुन्छ । म एउटा बराबर ५ सय कम्पनिले रेस्क्यु गरेका होलान् । म पैसा नै उठाउँछु । मैले ४ हजार वा ५ हजार डलरभन्दा बढी चार्ज लिएको छैन । सरकारले रेट नतोक्दा समस्या भएको छ । कति रेस्क्यु गर्यौँ भनेर हामीले मन्त्रालयलाई विवरण बुझाएका छौँ । सम्बन्धित ठाउँमा बुझाएका छौँ तपाईंहरुलाई दिन मिल्दैन । त्यो पत्र अनुसार रेस्क्यु हो की कमर्सियल फ्लाइट भन्ने थाहा हुँदैन । यो सबै एजेन्टको बदमासीमा भइरहेको छ ।
मैले नेपालमा मात्रै होइन भारतमा समेत व्यापार गरिहेको हुन्छु । वर्षको २५ सय ३ हजार क्लान्ड भारतमा चलाएको छु । यहाँ लुटेर खानेको देश छ । म व्यापार गरेर खाने मान्छे हुँ ।
राम सापकोटाद्वारा दियोपोस्टको समाचारप्रति खण्डन,‘समाचारमा कुनै सत्यता छैन’